Lionel messi iyo kooxo badan oo fariin u direen Ronaldinho.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Lionel messi iyo kooxo badan oo fariin u direen Ronaldinho.
Shalay oo axad eheed hooyada dhashay Ronaldinho ayaa u dhimatay cudurka Corona Veris sida shaaca laga qaaday maalinimadii shalay eheed hooyadiis ayaa lagu magacaabi jiray Dona Miguelina ayaa ku dhimatay da’da 71 Sano.
Dhamaan kooxihii iyo ciyaartoyda uu La soo ciyaaray ayaa Fariimo usoo direen iyaga oo la qeybsanaya xanuunka soo gaaray xidiga brazil Ronaldinho Waxaa ka xumaaday warka, Lionel Messi wuxuu la wadaagay farriin tacsi ah oo ku saabsan warbaahinta bulshada, isagoo taageeraya saaxiibkiisii hore.
\_”Ronnie, ma haysto ereyo mana rumeysan karo,\_” farriinta Messi ayaa bilaabatay.
Waxaan kaliya doonayaa inaan kuu soo diro xoog badan iyo hambalyo weyn adiga iyo qoyskaaga oo dhan.
Waan ka xumahay khasaarahaaga. Nabad ha ku nasiyo.\_
Dhowr naadi oo uu Ronaldinho ka ciyaaray ayaa sidoo kale farriin ku dhajiyay warbaahinta bulshada, iyagoo muujiyay taageerada ay u hayaan xidiga xulka Brazil.
Previous articleNiko Kovac oo isbedel weyn ku sameeyey kooxda Monaco xilli uu guul ka gaaray PSG.
Next articleShola Shoretire oo Riyadiisa Rumoowday kadib Safashadiisii Xalay.